Kuchinja Kwakaita B2B Kuchinja | Martech Zone
Kuchinja kweB2B Kuchinja
Chitatu, December 11, 2013 Chipiri, Zvita 10, 2013 Douglas Karr
Iyi infographic kubva Kwidziridza Nhau Yemagariro zvakanaka zvinoratidzira mukana wekushambadzira kuri mukati sechikamu chenyu chese chekutengesa maitiro. Zvinosuruvarisa, zvakadaro, kuti ivo vanosarudza kukanda zano rimwe vachirwisa rimwe pane kupa kuti makambani mazhinji eB2B ari kusanganisa sei marongero maviri aya.
Nokubatanidza nzira inopinda uye inobuda yekutengesa kweB2B, unogona kutora uye kurovera zvaunotungamira sezvavanosangana nezvako zvemukati uye zvemagariro zviitiko online. Izvi zvinopa yakanakisa data yeako kubuda mazano. Inokugonesa iwe kudzidzisa yako tarisiro uye nekuvatyaira ivo kuenda kunotengesa. Inoita kuti timu yako yekutengesa ivhare kutengesa nekukurumidza, kuwedzera kukosha kweavo vatengesi, uye kuenzanisa vatengi vakakura kune zvigadzirwa nemasevhisi aunopa.
B2B Kutengesa kwachinja - asi kuwedzeredza matekinoroji ari mukati nekunze anogona kuwedzera kutengesa kwako, kuwedzera kugadzirwa kwemari, uye kutyaira chiremera chinodikanwa nechako chekushambadzira.
Tags: b2b kushambadziraBloggingkutonhora kudanamail yakanangazvemukati zvekudzidzisaEmail Marketinginboundkutengesa kwakawandakubudakutengesa kwakabudamvumo yakavakirwa emaildhindadzoka pakudyararfpsRoyiseoevanhu vezvenhaucommerce inoratidza
Matanho manomwe kuNyaya Yakakwana
Zvita 12, 2013 na1: 07 PM